Daniel 6 | Intanɛt So Bible| Wiase Foforɔ Nkyerɛaseɛ
Persia mpanyimfo bɔɔ Daniel ho pɔw (1-9)
Daniel kɔɔ so bɔɔ mpae (10-15)
Wɔtow Daniel too agyata amoa mu (16-24)
Ɔhene Dario hyɛɛ Daniel Nyankopɔn anuonyam (25-28)
6 Dario hui sɛ eye sɛ oyi ɔhene asoafo 120 na ɔde wɔn sisi ahenni no nyinaa so.+ 2 Ɔde ahemfi mpanyimfo baasa sisii wɔn so, na na Daniel yɛ baasa no mu baako.+ Baasa no na na ɔhene asoafo no+ bu akontaa kyerɛ wɔn, sɛnea ɛbɛyɛ a ɔhene renhwere ade. 3 Ná Daniel da nsow wɔ ahemfi mpanyimfo ne ɔhene asoafo no mu, efisɛ na onim nyansa paa,+ na na ɔhene ayɛ n’adwene sɛ ɔbɛma no dibea kɛse paa wɔ ahenni no nyinaa mu. 4 Saa bere no, na ahemfi mpanyimfo ne ɔhene asoafo no rehwehwɛ sɛ wobenya Daniel ho asɛm wɔ adwuma a ɔhene de ama no no* ho, nanso wɔannya bi, na wɔanhu ne ho bɔne biara nso, efisɛ na odi nokware, ɔmfa n’adwuma nni agoru, na na bɔne biara nni ne ho. 5 Enti mmarima no kae sɛ: “Yɛrennya Daniel yi ho asɛm biara; yebenya no a, gye sɛ ne Nyankopɔn mmara ho.”+ 6 Ɛnna ahemfi mpanyimfo ne ɔhene asoafo yi kaa wɔn ho boom kɔɔ ɔhene nkyɛn kɔka kyerɛɛ no sɛ: “Ɔhene Dario, nya nkwa daa. 7 Ahemfi mpanyimfo, atitiriw, ɔhene asoafo, ɔhene agyinatufo, ne amradofo nyinaa ayɛ adwene sɛ wɔde ahyɛde ne mmara bi bɛba wɔ ɔhene din mu, na wɔahwɛ ama mmara no ayɛ adwuma. Ɛne sɛ, nnafua 30 de, ɛnsɛ sɛ obiara bisa biribi fi onyame anaa onipa biara hɔ, ka wo, ɔhene ho. Obiara a wantie no, wɔbɛtow no akyene agyata amoa mu.+ 8 Enti ɔhene, hyɛ mmara no, na fa wo nsa hyɛ ase,+ sɛnea ɛbɛyɛ a obiara rentumi nsesa no, sɛnea Media ne Persia mmara a wɔnsesa no no te.”+ 9 Enti Ɔhene Dario de ne nsa hyɛɛ ahyɛde ne mmara no ase. 10 Bere a Daniel tee sɛ ɔhene de ne nsa ahyɛ mmara no ase pɛ, ɔkɔɔ ne fi. Ná n’abansoro dan mu mfɛnsere a ɛkyerɛ Yerusalem no abuebue.+ Na da biara, na obu nkotodwe mprɛnsa bɔ mpae, na na oyi ne Nyankopɔn ayɛ sɛnea na ɔtaa yɛ no. 11 Ɛnna saa mmarima no bɔ wuraa Daniel fi, na wohui sɛ ɔde n’abisade reto ne Nyankopɔn anim, na ɔresrɛ no sɛ ɔnyɛ no adom. 12 Enti wɔkɔɔ ɔhene nkyɛn, na wɔkɔkaee no mmara a wahyɛ no. Wɔkae sɛ: “Ɔhene, ɛnyɛ wo na wode wo nsa hyɛɛ mmara ase sɛ obiara a obebisa onyame anaa onipa biara hɔ biribi aka wo ho nnafua 30 mu no, wɔbɛtow no akyene agyata amoa mu?” Ɔhene buae sɛ: “Asɛm no atim sɛnea Media ne Persia mmara a wɔnsesa no no te.”+ 13 Ɛhɔ ara na wɔka kyerɛɛ ɔhene sɛ: “Daniel a ɔka Yudafo a wɔatu wɔn ase aba ha ho no,+ ɔhene, ommu wo, na mmara a wode wo nsa ahyɛ ase no nso, ɔmfa nyɛ hwee, na da biara, ɔbɔ mpae mprɛnsa.”+ 14 Bere a ɔhene tee asɛm no, ɛyɛɛ no yaw paa, na odwen ho ara hwɛe sɛ obenya ɔkwan bi afa so agye Daniel anaa. Ɔyɛɛ biara sɛ obegye no; ɔyɛe ara kosii sɛ owia tɔe. 15 Ɛnna mmarima no kaa wɔn ho boom kɔɔ ɔhene nkyɛn kɔka kyerɛɛ no sɛ: “Ɔhene, kae sɛ, Mediafo ne Persiafo mmara kyerɛ sɛ, ahyɛde ne mmara biara a ɔhene ahyɛ no, wontumi nsesa no.”+ 16 Enti ɔhene kae sɛ wɔnkɔfa Daniel mmra, na wɔkɔfaa no bae bɛtow no kyenee agyata amoa mu.+ Na ɔhene ka kyerɛɛ Daniel sɛ: “Wo Nyankopɔn a wosom no daa no begye wo.” 17 Na wɔde ɔbo bi bae bɛtoo amoa no ano, na ɔhene de ne kawa, ne n’abirɛmpɔn nkawa yɛɛ ahyɛnsode wɔ ɔbo no so, sɛnea ɛbɛyɛ a wɔrensesa Daniel ho asɛm biara. 18 Na ɔhene kɔɔ n’ahemfi. Ɔkyen kɔm anadwo no, na wamfa biribiara annyigye n’ani,* na wantumi anna.* 19 Ɛnna ɔhene sɔree ahemanakye, na ɔyɛɛ ntɛm kɔɔ agyata amoa no ano. 20 Bere a ɔbɛn amoa no ano no, ɔde awerɛhow nne teɛɛm frɛɛ Daniel. Ɔhene bisaa Daniel sɛ: “Daniel, Onyankopɔn teasefo no akoa, wo Nyankopɔn a wosom no daa no atumi agye wo afi agyata no nsam anaa?” 21 Ntɛm ara na Daniel ka kyerɛɛ ɔhene sɛ: “Ɔhene, nya nkwa daa. 22 Me Nyankopɔn asoma ne bɔfo ama wabemuamua agyata no ano,+ na wɔanyɛ me hwee,+ efisɛ wahu sɛ midi bem wɔ n’anim; na wo, ɔhene nso, menyɛɛ wo bɔne biara.” 23 Na ɔhene ani gyei paa, na ɔkae sɛ wonyi Daniel mfi amoa no mu. Bere a woyii Daniel fii amoa no mu bae no, wohui sɛ biribiara nyɛɛ no, efisɛ ɔde ne ho too ne Nyankopɔn so.+ 24 Na ɔhene ma wɔkɔfaa mmarima a wɔbɔɔ Daniel sobo* no bae, na wɔtow wɔn guu agyata amoa no mu, wɔne wɔn mma ne wɔn yerenom nyinaa. Wɔannu amoa no ase mpo na agyata no bu faa wɔn so, na wɔbobɔɔ wɔn nnompe nyinaa mu.+ 25 Ɛnna Ɔhene Dario kyerɛw kɔmaa nkurɔfo, aman, ne wɔn a wɔka kasa horow a wɔtete asaase nyinaa so+ no nyinaa sɛ: “Asomdwoe pii nka mo! 26 Merehyɛ mmara sɛ, ahenni a midi so tumi nyinaa mu no, obiara ho mpopo na onsuro Daniel Nyankopɔn no.+ Efisɛ ɔno ne Onyankopɔn teasefo no, na ɔte hɔ daa. N’ahenni rensɛe da, na ne tumi* wɔ hɔ daa.+ 27 Ɔno na oyi+ ne nkurɔfo na ogye wɔn. Ɔyɛ nsɛnkyerɛnne ne anwonwade wɔ ɔsoro ne asaase so,+ efisɛ wagye Daniel afi agyata nsam.” 28 Na esii Daniel yi yiye wɔ Dario ahenni mu+ ne Persiani Kores ahenni mu.+
^ Nt., “ahenni no ho adwuma.”
^ Ebetumi nso akyerɛ, “wamma wɔamfa nnwontofo biara amma n’anim.”
^ Nt., “ne nna guan fii ne ho.”
^ Anaa “wotwaa asɛm too Daniel so.”
^ Anaa “tumidi.”